Niverina tamin'ny asany ny fizahantany any Tonizia
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Tonizia » Niverina tamin'ny asany ny fizahantany any Tonizia
Septambra 26, 2017
Tunisia dia mikendry ny hisambotra mpandraharaha mpizahatany bebe kokoa ao amin'ny WTM London 2017, taorian'ny vaovao fa hiverina any an-toerana i Thomas Cook sy ireo orinasam-pitaterana anglisy hafa manomboka amin'ny fiandohan'ny taona 2018.
Ny birao raharaham-bahiny UK dia nanova ny toro-hevitra momba ny dia tamin'ny volana Jolay, nanokatra ny làlana ho an'ireo mpandraharaha mpizahatany anglisy hanomboka hivarotra fialantsasatra ho any amin'ny toerana malaza indray.
Ny sidina nasionaly Tunisair - izay tsy nijanona nanidina avy any UK mankany Tunisia - dia miasa sidina isan'andro avy any Londres. Thomas Cook dia nanohy nivarotra fialantsasatra izay hanomboka amin'ny Febroary 2018, ahitana hotely valo akaikin'ny toeram-pialan-tsasatra Hammamet.
Mounira Derbel Ben Cherifa, talen'ny birao nasionalista mpizahatany toniziana any UK, dia nandray tsara ny vaovao fa hiverina any Tonizia i Thomas Cook sy ny hafa, toa an'i Just Sunshine, Cyplon Holidays ary Tonizia First.
"Matoky izahay fa hiverina any Tonizia indray ny Brits satria efa nanao fialan-tsasatra tao izy ireo nandritra izay 40 taona lasa izay," hoy izy.
Nasongadiny fa brits voatokana an'arivony maro no nanohy nanao fialantsasatra tany amin'ny firenena afrikana avaratra na dia teo aza ny fandraràn'ny birao vahiny.
Derbel Ben Cherifa dia nilaza fa ny hafatra lehibe atsy amin'ny WTM London dia ny hoe "Misokatra ho an'ny orinasa indray i Tonizia".
"Hifandray hatrany amin'ireo mpiara-miasa aminay izahay ary hanavao azy ireo momba ny vokatra vaovao, ny hetsika ary ny marika momba ny fahavononantsika handray ireo mpitsangatsangana anglisy," hoy izy hoy izy.
Ny birao nasionalista mpizahatany toniziana dia mamolavola drafitra marketing miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka ara-barotra, toy ny mpandraharaha fizahan-tany, ny mpampahalala vaovao ary ny mpitsangatsangana ary koa ny mpanjifa.
Nilaza izy fa i Thomas Cook - izay nisolo tena ny antsasaky ny tsenan'i UK - dia nifandray tamina birao fizahan-tany tany London sy tany Tonizia, satria naniry fatratra ny hamerina ny programa Toniziana faran'izay haingana.
Talohan'ny fandraràna tamin'ny 2015, Brits tokony ho 420,000 no nandeha tany Tonizia isan-taona. Tamin'ny 2016, nilatsaka tamin'ny 23,000 mahery izany noho ny fameperana.
Niakatra ny isa tamin'ny taona 2017, ary efa ho 17,000 no nandeha tamin'ny valo volana voalohany tamin'ny taona, tafakatra 14% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny 2016.
Nanombatombana i Derbel Ben Cherifa fa hahatratra 30,000 ny isa amin'ny taona 2017, ary mihoatra ny avo roa heny amin'ny 2018 ka hatramin'ny 65,000.
Nilaza izy fa ny birao fizahan-tany dia hiasa hanome toky ireo mpandeha sy hanasongadinana an'i Tonizia manintona, toy ny mari-pamantarana wintersun, ivon-toeran'ny fahasalamana, fizahan-tany ary tsena fivarotana.
Manana morontsiraka mihoatra ny 700 kilaometatra manamorona ny Ranomasina Mediterane izy; hotely 800 eo ho eo, mikarakara teti-bola marobe; ary taranja golf 10 namboarina iraisam-pirenena.
Misy tranokala manan-tantara efa hatramin'ny an'arivony taona maro, ary toerana fanaovana horonantsary malaza ho an'ny sarimihetsika toy ny The English Patient, Monty Python's Life of Brian ary sarimihetsika marobe avy amin'ny franchise Star Wars.
Ary koa amin'ny fandraisana anjara amin'ny WTM London, ny birao fizahan-tany dia mikasa ny hampiofana ireo mpiasan'ny fitsangatsanganana UK miaraka amina andiam-pitaterana an-dalambe sy dia lavitra ataon'ny mpiasan'ny fizahantany. Fitsidihana gazety tsy tapaka ihany koa no kasaina hamoahana ny hafatra momba an'i Tonizia.
World Travel Market London, Tale Senior, Simon Press, dia nilaza hoe: “Vaovao tsara ho an'ny varotra UK izany. Fantatro fa niarahaba ny fiverenan'ny fialantsasatra Toniziana ireo masoivoho mpitsangatsangana anglisy, satria maro ny mpanjifa manontany momba ny fialantsasatra ho an'ny firenena.
"Nampahery ny nahita faingana i Thomas Cook dia afaka nanomboka nivarotra fialantsasatra tamin'ny tsena britanika, satria misy ekipa fampiantranoana natokana ho an'ny mpanjifa alemanina, belza ary frantsay, izay ny governemanta dia tsy nanoro hevitra ny amin'ny fandehanana any amin'ny firenena."
Tanàn-dehibe fitsidihana 10 lehibe indrindra eran-tany
Air BP manitatra mankany amin'ny seranam-piaramanidina Muenster Osnabrück